Maamulka Boosaso oo ganaaxaya gaadiidka muraayadaha ku leh bacaha madow – Kalfadhi
Maamulka degmada Boosaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in laga bilaabo maanta la mamnuucay baabuurta ay ku xiran yihiin bacaha madow ee aan la arki karin waxa gudahooda ku jira.
Duqa degmada Boosaso Cabdisalan Bashiir wuxuu sheegay in baabuurkii ay ku xiran yihiin bacaha madow iyo dukaankii lagu iibinayaba la ganaaxi doono $100.
Ciidamada Booliska ayaa fulin doona hawlgalka ka dhanka ah gaadiidka leh bacaha madow. Duqa degmadu wuxuu sheegay in lacagta ganaaxa ah ee laga qaado baabuurta iyo dukaamada bacaha madow la siin doono ciidamada.
“Dowladda hoose ee degmada ayaa bixin doonta warqada lagu jarayo ganaaxa bacaha madow” Ayuu yiri Taliyaha guud ee ciidamada booliska Puntland Gen. Muxyadiin Axmed Muuse oo isna ka hadlay shir jaraa’id oo ka dhacay Boosaso.
Magaalada Boosaso waxaa beryahan ka socda hawlgal ay ciidamo isku dhaf ah ka qaybgelayaan oo lagu sugayo nabadgelyadeeda. Dilalka qorshaysan ee lagu beegsado ganacsatada iyo dadka sumcada ku dhex leh bulshada ayaa teer iyo sanadkii hore ku sii kordhayay magaalada.